Netflix weputara ihe nkiri 55 ọhụrụ mbụ na ihe nkiri TV na Mach - nke a bụ ndepụta zuru ezu - BGR - TELES RELAY
Netflix weputara ihe nkiri 55 izizi mbụ na ihe onyonyo onwa Machị - lee ndepụta zuru ezu
Ọ bụ ihe ịtụnanya na anyị na-ebi ugbu a mgbe Netflix nwere ike iwepụta ihe nkiri ọhụrụ mbụ 40, ihe nkiri TV na ọpụrụiche n'otu ọnwa - a na-ewere ọnwa a site na ndị na-akwado ihe nkiri. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe na-eme na Febụwarị, nke bụ ọnwa kacha dị mfe na Netflix ruo ihe karịrị otu afọ ma a bịa na olu nke ọdịnaya mbụ mbụ agbakwunyere na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Ọ dabara nke ọma, enwere ụfọdụ nnukwu mgbakwunye iji kwụọ ụgwọ maka obere olu, dị ka ihe ngosi ọhụrụ dị egwu Locke & Key et Narcos Mexico oge 2. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n’aka na ịgaghị ihe ọ bụla, lelee nchịkọta anyị ihe nkiri ọhụụ mbụ ọhụụ ma gosipụta na-abịa na Netflix na Febụwarị.
N’ezie, February ga-agwụ agwụ, yabụ, ọ bụ oge ị ga-elebara anya na Machị. Ọ bụrụ na iwe were gị na Netflix belatara ihe n'ọnwa a, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na mwepụta ntọhapụ nke Netflix nke March nwere usoro izizi, ihe nkiri, ihe nkiri na ihe nkiri na ọtụtụ ndị ọzọ. ọbụna karịa. Onu ogugu 55 di iche-iche ga-erute onye izizi mbu n’ime onwa a, ma enwere otutu oku buru ibu maka ndi debanyere aha.
O siri ike ịmara ebe ị ga-amalite mgbe ị na-ekpuchi ntọhapụ ọhụrụ ndị na-ekpo ọkụ ị ga-echere, yabụ anyị ga-ekpuchi ha oge niile site na Castlevania oge 3 na-abịa na March 5. A ga-ahapụ Netflix asaa ọzọ ka otu ụbọchị gachara na Machị 6, otu ga-abụrịrị Rada gị: Spenser Nzuzo. Nke ahụ ziri ezi, Mark Wahlberg mechara nwee fim nkiri nke ya na Netflix. Mwepụta ndị ọzọ bụ isi na-atụsi anya ike itinye nke ihe ọhụụ pụrụ iche nke Marc Maron kwuru, oge 2 nke alaeze, oge 3 nke J.Randall, oge 3 nke The Boss Baby: laghachi azụmaahịana ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mgbe ahụ enwere ọbịbịa kachasị atụ anya na Machị 2020, nke Netflix na-echekwa maka njedebe nke ọnwa. Nke ahụ ziri ezi, Jason Bateman mechara laghachi maka oge 3 nke Ozarkọ dịkwa egwu.
Ihe ndị a niile, na ndị ọzọ, ga-ahapụ ka ha wepụta ya na Machị, n’okpuru ebe a ka usoro nbudata zuru oke nke 55 sitere na mmalite ọhụrụ. Enwekwara njikọ na ibe Netflix ọ bụla dị ugbu a ka ịnwere ike lelee trailers. Jide n'aka na ị ga-elele ihe nkiri niile na ihe onyonyo si n’ihe nkiri ndị ọzọ tụrụ anya na ha ga-erute na Netflix n’ọnwa Machị.
Gaa na March 3
Gaa na March 6
Gaa na March 8
Gaa na March 10
Gaa na March 11
Gaa na March 12
Ndepụta Ọgụgụ Hospitallọ Ọgwụ - NETFLIX ORIGINAL
Gaa na March 13
Gaa na March 16
Gaa na March 17
Gaa na March 19
Gaa na March 20
Gaa na March 23
Ala Levante - ANYANWU NETFLIX
Gaa na March 25
Gaa na March 26
Gaa na March 27
Isi Iyi Foto: XanderSt / Shutterstock
Afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ 2020: isi ihe dị mkpa na isi okwu na Courtlọikpe Kasị Elu
Rapper Pop Smoke, 20, nwụrụ na mwakpo ụlọ nke California, ndị isi kwuru - ndị mmadụ